I-Stylish Johannesburg Apartment(WiFi ne-Netflix) - I-Airbnb
Johannesburg, GP, iNingizimu Afrika
Thola i-loft yangempela yokuhlala eGoli. Konke ukusebenzisa isikhala nomklamo ngobungcweti, othuthukiswa ngobuningi besikhala samafasitela, ukwakheka okufudumele kanye nenala yokukhanya kwemvelo.
I-Space yethu iyipulani elivulekile lesimanje elinefenisha ephelele ebheke phezulu enkabeni yeGoli.Uphahla lwethu lwamapulangwe silwenzile ukuze sidale umuzwa wezimboni ze-rustic. Ifulethi elingaphezulu libheka amasimu aluhlaza omphakathi.
4.73 · 113 okushiwo abanye
Ukujikijelwa kwetshe kude nendawo empompayo yase-44 Stanley. Ifulethi liseduze nemizila emikhulu yezokuthutha futhi ibanga lokuhamba ngezinyawo i-UJ kanye nekhempasi yase-Wits.Eduze kakhulu nesiteshi iGautrain esiholela esikhumulweni sezindiza nakwezinye izindawo ngaphakathi kwedolobha.